I-Spell Checker Inkondlo nguMark Eckman noJerrold H. Zar
Iimpawu Ezibangelwa "Umviwa Wokumangalisa I-Pullet"
Ngexesha elinye okanye elinye, mhlawumbi ugijimla ngaphaya kwenguqu ethile eyaziwa ngokuba yi "Inkcazo yeSpell Checker." Kubhalwe okokuqala ngo-1991, ukubonakala kwayo kokuqala kwegosa kwakubhalwe kwiNcwadi ye-Irreproducible Results ngo-1994. Ukususela ngoko, uye wenza indlela yayo nge-Intanethi phantsi kwezihloko ezahlukahlukeneyo, kuquka "i-Spell Checker Blues," "Inetyala kuMhloli wokuPelisa," kwaye "I-spellbound." Phantse njalo inkondlo ithathwa ngokuba engaziwa okanye, ngokudlala ngokubanzi, "i-Sauce engaziwayo."
Masibeke irekhodi ngqo. Isihloko senkondlo njengoko siyazi namhlanje siyi-"Candidate for Pullet Surprise," kwaye inguqu eyongeziweyo yenziwa ngo-1992 nguDkt. Jerrold H. Zar, uprofesa ovela kwincwadi ye-biology kunye nomfundisi ohlala phantsi kwisikolo esikolweni esiphakamileyo kwi-University of Illinois Illinois . Ngokutsho kukaDkt. Zar, isihloko siphakanyiswe nguPamela Brown, imizila yokuvula yabhalwa nguMarko Eckman, kunye namazwi angama-123 engumbongo angamaphutha, nangona zonke zichanekile ngokuchanekileyo.
Uhlaziyo oluvela kuMnu Mark Eckman
Ekuqaleni kukaMatshi 2007, uMark Eckman wayenomusa ngokwaneleyo ukusinika ngolwazi olongezelelweyo malunga nendima yakhe ekudaleni inkondlo yokuhlola inkcazo. Emuva ngo-1991, xa uMnu. Eckman esebenzela i-AT & T, "i-imeyile yayiba nomsindo, kodwa yayitshintsha ngokukhawuleza":
Ngendlela ethile ingxoxo yesofthiwe yaba yiinkampu ezimbini zokucinga. Ngakolunye uhlangothi ngabaqeshwa bokuthengisa bathi kufuneka sibe ne-spelling checker kwisofthiwe kuba abaninzi abasebenzisi be-imeyile babengenabo abanezakhono.
Kwiphepha eliphambene neqela lalikholelwa ukuba akufanele ubhale i-imeyile ukuba awukwazi ukupela.
"Emva kweveki ezimbini zinikela kwaye zithatha, ndathumela iindidi ezimbini zokuqala. Injongo yam yayikukubona ukuba abantu baya kubuya becinga kunokungqubuzana, kwaye emva kokuba imisonto ibonakale kwi-AT & T namhlanje [i-imeyile yeendaba ukuhlaziywa], ingxoxo yafika ekumeni.
Kungekudala emva koko ndifumene i-imeyile evela kumntu endingazange ndidibanise naye ngamaphepha kunye namaphepha eendinyana ezongezelelweyo.
"Ngo-1994 okanye ngo-1995 ndenza intetho kwiinjine zokukhangela, ndangena igama lam kunye neqendu likaDkt. Zar.
"Ilahlekile kuyo yonke into eyadlulayo yayiyiinjongo kunye neembali ezimbini zokuqala.
Kwafika kunye nePC
Ibalaselisa ukuphononongwa kwam
Iingcamango andinakukwazi ukuzenza ulwandle.
Ndagijima le nkondlo
Ndiqinisekile ukuba uyavuya ku-cha
Ileta yayo igqibelele kuyo
Umhloli wam undixelele.
"Andizange ndiphuphe oko kwenzeka emva kokuba ndisuse ifayile. Ubuncinci andizange ndiqalise ukuthumela imiyalezo emfutshane."
Umbulelo wethu kuMnu. Eckman ngokusinceda senze irekhodi ngqo.
Ngaphandle kokuzivocavoca kwi-humor humor, "Umviwa we-Pullet Surprise" uhlala nje njengengqiqo yokuqakraza kwabo bonke ababeka kakhulu ithemba kwi- spell checkers .
Umviwa kwiNkqantosi yePullet
nguMark Eckman noJerrold H. Zar
Kwafika kunye nePC.
I-plane lee ibonisa ezine i-revue
U-Miss steaks akanako ulwandle lwamaqhina.
Ijoni lagijima le mbongo,
Isiqiniseko sakho esiqinisekileyo sivuyayo kabini.
Ukuhluka kwaso kuphethwe kuyo.
Umkhangeli wam wandiqhayisa.
I-checker iyintonga yesandi,
Iqhwala i-thyme ye-thyme.
Inceda kum udidi olungumhlanga ombini,
Undinceda xa iso lisizi.
I-frays nganye ivela kwiskrini sam
Ijoni lathintela inyosi enkulu.
I-checker igalela i-oere yonke igama
Ukujonga umgaqo wokupeliswa kwempepha.
Inyosi phambi kwe-checker veil
Ixesha lokupasa i-mite,
Yaye ukuba asikho nto ekhoyo,
Thina siyinkuni sokhuni iwayini.
I-Butt ngoku inyosi ibangela ukuba upelo lwam
Uhlolwe ngolu hlobo lwebhanki,
Abo bayazi iphoso kunye nam,
I-iso yeso isigqoke.
Ngoku upelo lwepeliti lusegqeni,
Yenza amaqhosha azisa i-tier.
Umvuzo wam uhlawulela ngenxa yokuzonwabisa
Ngohlobo lokugqithwa kwegama njengoko uva.
Ukunyamekela ngokunyamekela kuyinyani
Inkohlakalo iphumelele kufuneka inyokodo,
Kwaye i-dee ixhamle into enokuyenza,
Sew i-flaw's knot ngokuzwakalayo.
Hlwayela i-ewe ingaba ulwandle kuba kutheni amazolo ethandaza
Ezi zithintelo ezinxibe ezilwandle ezine,
Kwaye kutheni iliso laphuka emibini
Thenga ukulungela ukufunwa nokuncenga.
"Isixa" ngokuchasene "Inani"
Uludwe lweeNombolo ezili-130 zeeMisa (okanye iiNtaba ezingezantsi) ngesiNgesi
Kuye, Kwaye, kunye neBini
Wabo, apho, kwaye
I-20 yeSelfelling Spelling Mnemonics
Ukusetyenziswa kokude kunye nokuqhubekayo
Amagama aqhelekileyo adidekile: Acacile kwaye acacile
Ukuzivocavoca ekunciphiseni ukuLungisa kwi-Business Writing
IGrisi - Iinkcukacha ezifutshane malunga neGrisi
Indlela amaRoma atyhola ngayo kwiRiphabhliki yaseRoma
Imibuzo yezopolitiko kufuneka Ukwazi
Iimfuno eziphambili zee-Episodes ze-Simpsons
I-Stony Corals (i-Hard Corals)
Ixilongo, iFriled Dinosaur Profiles kunye neMifanekiso
Umhlaba okanye iPhermer yePraint
Iifilimu ze-10 zeMidlalo eziLutsha
Ulungiso lwe-Venturi kwi-Scuba Regulators (iDive / Pre-Dive, Off-On, kunye +/- Switch)
UYesu Uphilisa Indoda Eyimfama eBhesaida (Marko 8: 22-26)
KwiNgcaciso kaZwelonke, ngu-Oliver Goldsmith